बिक्री खरीद गाईडका लागि मोटर चालित बाइक कसरी छनौट गर्ने ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार बिक्री खरीद मार्गनिर्देशनको लागि मोटोराइज्ड बाइक कसरी छनौट गर्ने
परम्परागत बाइक भन्दा छिटो र सार्वजनिक यातायात भन्दा सुरक्षित COVID-19 को समयमा इलेक्ट्रिक बाइक अधिक र अधिक व्यक्तिहरूको लागि ठूलो यातायात बन्छ। पार्किंग स्पेस विशेष रूपमा खोज्नुपर्दैन, उदाहरणका लागि यदि तपाई फोल्डिंग मोट्राइज्ड बाइक किन्नुहुन्छ भने, यो पूरै पुग्छ र तपाईंको अफिसमा राख्न सक्दछ। किनभने मोटरसाइकल बाइक धेरै प्रकारका प्रकारहरू छन्, हुनसक्छ तपाई मध्ये कोही कोही सँधै मोटरसाइकल बाइक किन्नु अघि निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ। अर्को मैले केहि कारकहरू चयन गरेको छु तपाईले निर्णयको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईलाई उत्तम ई बाइक लिन सजिलो होस्।
तपाईलाई मोटर चालित बाइक किन चाहियो?
यो एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि तपाईं इलेक्ट्रिक बाइकको साथ के गर्दै हुनुहुन्छ। व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यका लागि उत्तम ई-बाइक प्रयोग गर्दैछ। परम्परागत बाइकको तुलनामा, मोटर चालित बाइकमा इलेक्ट्रिक मोटर, ब्याट्री र इलेक्ट्रिक नियन्त्रण प्रणाली छ। बाइक इलेक्ट्रिकको प्रयोगको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको यो वातावरण अनुकूल छ, र वातावरणमा कुनै प्रदूषण उत्पन्न गर्दैन। उत्तम ई-बाइक छोटो छोटो छिटो कभर गर्नको लागि यातायातको उपयुक्त साधन हुन्। त्यसैले केही व्यक्तिहरूले बाइक इलेक्ट्रिक प्रयोग गरीरहेका छन् आफ्नो कामको समयमै समाप्त गर्न, उदाहरणका लागि, द्रुत कम्युटिंग। तिनीहरूले आफ्नो समय बचाउँछन् आफ्नो छिमेकी स्थानहरू वरिपरिको इलेक्ट्रिक बाइकमा सजिलैसँग यात्रा गरेर। यदि तपाईं आफ्नो शरीर व्यायाम र केही क्यालोरी जलाउने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्याडल-सहायता मोड र प्याडल मोड दुबै उत्तम विकल्प हो।
एक मोटर चालित बाइकको वजन कति छ? प्रत्येक मोडल इलेक्ट्रिक बाइकको वजन फरक हुन्छ। यो राम्रोसँग निर्माताको प्रदान गरिएको विशिष्टताको साथ तिनीहरूको वजन जाँच गर्न सकिन्छ। सामान्य बोल्दै, वजन कुनै ठूलो फरक छैन। बाइक आकार, मोटर, ब्याट्री र बाइक प्रकारको आधारमा, प्रत्येक मोडेलका सर्वश्रेष्ठ ई-बाइक कम्पोनेन्टहरूमा भिन्नताहरू हुन्छन्, त्यहाँ धेरै भिन्नताहरू सबैभन्दा भारी देखि हल्का ई-बाइक सम्म छन्। सामान्यतया, तह इलेक्ट्रिक बाइक वा सडकeबाइक हल्का e-બાઇकको हुन्, र उच्च पावर फ्याट टायर इलेक्ट्रिक बाइक भारी ई-बाइकको हो, तर मोटर साइकल चलाउँदा यस भारी भावना हटाउनेछ। २० देखि २20 किलोग्राम बीचको वजन आदर्श छ।
यो कुरालाई पनि वेवास्ता गर्न सकिदैन। वास्तवमा तपाईलाई त्यस बारे थाहा हुनुपर्दछ। केहि देशहरूमा बाइकको अधिकतम स्पिडको केहि सीमितताहरू छन्। उदाहरणका लागि, युरोपियन युनियन देशहरूले अधिकतम गति २k किमि प्रति घण्टाभन्दा माथि गर्न सक्दैन। यदि तपाई गतिलाई एक विकल्पको रूपमा गम्भीरताकासाथ विचार गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः बजेट बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। अधिकतम गतिको उच्च, बाइकको उच्च इलेक्ट्रिकको लागत। सामान्यतया, औसत गति २-25--25 किमी / घण्टा हुन्छ, जुन सुरक्षित र यात्रा को लागी सुविधाजनक छ। कसैको लागि, इलेक्ट्रिक बाइक छनौट गर्ने मुख्य कारक अपहिल क्षेत्रहरूमा उनीहरूको सवारी सरल बनाउँदैछ गति छैन।
केही व्यक्तिहरू मान्दछन् कि सस्तो ई-बाइकको गुणवत्तामा मध्यम-उच्च-बाइक इलेक्ट्रिकबाट कुनै ठूलो भिन्नता छैन। जे होस्, त्यो पूर्वाग्रह हो। विशेष रूपमा, ebike को गुणवत्ता को मूल्य संग केहि निश्चित सम्बन्ध छ। इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण प्रणाली टेक्नोलोजी, सामग्री, घटक र अधिकको सर्तमा तिनीहरू टायरको गुणस्तर, डिस्क ब्रेक, ब्याट्री, वारेन्टी सेवा, ect मा केहि फरक छन्।
यदि तपाईं मोटर चालित बाइकमा रुचि राख्नुहुन्छ र अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अघिल्लो लेखहरू ब्राउज गर्न वा हाम्रो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक वेबसाइट, तल तपाइँको सन्देश छोड्नुहोस्।
Tags:मोटर चालक बाइकहरू इलेक्ट्रिक मोटर बाइक
अघिल्लो: इलेक्ट्रिक मोपेड बाइक किन्नका फाइदाहरू
अर्को: १२128 औं क्यान्टन फेयर अक्टुबरमा अनलाइन आयोजित हुनेछ